War deg DEG ah :- Wiil Somali ah oo mindi lagu Dilay Magaalada Büsum oo u dhaw magaalada Kiel ee Waqooyiga Dalka Jarmalka. - somalilandlivemedia
22:29 27. September 2017
Tuulada Büsum oo qiyaas ahaan Saacad u jirta Magaala Xeebeedka Kiel oo deegaan ahaan dhacda xeebaha waqooyi Bari ee dalka Jarmalka Ayaa wararka Naga soo gaadhayaan sheegayaan in lagu dilay Wiil soomaali ah . Dilka Ayaa waxa gaystay isla Wiil kale oo Somali ah oo lagu magacaabo Maxamed oo ay wadda degenaayeen dhismaha guriga. Wiilka la dilay Ayaa lagu magacaabaa Axmed waxana ay wararku intaas ku darayaan in marxuumku uu maanta galinkii hore
mehersaday Gabadh , galinkii danbe na falkan dilka ah loo gaystay , Booliiska magaalada uu falku ka dhacay ayaa gacanta ku soo dhigay gacan ku dhiig-laha gaystay dilka waxana ku socda baadhitaan . Wararku waxay intaas ku dareen in wiilka dilka gaystay uu madaxa ka jiranaa mudooyinkii u danbeeyey na xaaladiisa caafimaad aanay wanaag sanayn.
Ma ahaan markii ugu horaysay ee dil noocan OÖ kale ahi ka dhaco dalka Jarmalka barlse waxa marar kala duwan dhacay dilal dhalinayrada Somalida kuwooda ku dawakhay dalkan Jarmalku ay isu gaysteen iyo kuwo dadyawga kale ee ajaaniibta ahi u gaystaan
Burco:-Dabley Hubaysan Oo Weerar Ku Qaaday Xaafada Ku Taala Magaalada Burco Video
Dhallinyarada Beelaha HY Barri Oo Digniino Culus U diray Komishanka Somaliland
Daawo Gabiley :- Hooyo Qiireysan Oo Ka Codsatey Madaxweyne Jabuuti Inuu U Soo Daayo Wiilkeeda + Madaxweynihiisii Somaliland, Oo Ka Gaabsadey Muwaadinkaasi Video
Newer PostHalkan ka Daawo Muxadiradii ugu danbaysay Ee Sheekh Mustafe Xaji ismaciil Haruun Waa Kuma Hogaamiye
Older Post Shirkada Socdaalka Somaliland Ee Barri Iyo Galbeed oo Buses casri la soo Dagtay kuwaasi oo la jaan qaadi doono Dunida